बलिउड अभिनेत्री रेखाको फिटनेस र ब्यूटी सेक्रेट्स | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
बलिउड अभिनेत्री रेखाको फिटनेस र ब्यूटी सेक्रेट्स
प्रकाशित मिति ६ असार २०७६, शुक्रबार ०७:३० लेखक नेपाली जनता
भारतीय नायिका रेखा बलिउड फिल्म उद्योगमा सन् १९७० को दशकदेखि नै संलग्न छिन्। उनी सबैभन्दा सुन्दर नायिकाका रुपमापनि परिचित छिन्, जसले सत्तरीको दशकदेखि अहिलेसम्मका नायकनायिकासम्म संगै काम गरिसकेकी छिन्। उनले आफ्नो सौन्दर्यलाई अहिलेसम्म कसरी कायम राखेकी छिन्। आउनुस् थाहापाउनुस्, उनको ब्युटी सेक्रेट्स । डाइटः सही खानेकुरा खानु रेखाका लागि महत्वपूर्ण हो। उनी बेस्सरी फ्राइ गरेको र चिल्लो खानेकुरा खाँदिनन्। रोटी, दही, तरकारी र सलाद उनको खानाको अंग हुन्। उनी शाकाहारी हुन् र ओखर र अनार पनिउनी धेरै खान्छिन्। उनी खाना खाएको तीन घन्टापछि मात्रै सुत्न जान्छिन्। उनी सकेसम्म साँझको साढे ७ बजेसम्म डिनर लिइसक्छिन् ।
फिटनेशः रेखा स्वस्थ रहन र शरीरको आकारलाई दुरुस्त राख्न दैनिक १० देखि १५ मिनेटसम्म शारीरिक अभ्यास गर्छिन्। उनी गार्डे्निङ, नृत्य गर्न मन पराउँछिन्। यसबाट शरीर पनि फिट हुने उनको विश्वास छ। फिटनेश रुटिनमा उनी योगा पनि गर्छिन्।
स्पाः दैनिक रुपमा स्पा जानु रेखाको नियमित रुटिन हो। उनलाइ अरोमाथेरापी र आयुर्वे्दिक मसाजको महत्व राम्रोसंग थाहा छ। त्यसैले उनी घरमा आफंैले मसाज र स्पा गर्छिन्।
असल निद्राः राम्रो स्वास्थ्यका लागि निद्रापनि आवश्यक छ भन्ने उनलाई थाहा छ। त्यसैले उनी चाँडै सुत्ने र बिहान चाँडै उठ्ने उनको बानी छ। यसले उनलाई दिनभर उर्जा दिन्छ।
कपालः कपालको महत्व राम्रोसंग बुझेकी रेखाले यसलाई राम्रो हेरविचार गर्छिन्। उनले दही, अण्डा र मह मिसाएर आफैंले होमप्याक बनाउछिन्। उनी सातामा केहीदिन नरिवलको तेलले पनि कपालको मसाज गर्छिन्। जसले उनको कपाललाई चमकदार र उज्यालो बनाइरहेको हुन्छ। उनी बाहिर बजारमा पाइने उत्पादनहरू सकेसम्म लगाउँदिनन् ।
छालाः रेखा मेकअप नउतारिकन सुत्दिनन्। उनी क्लिनसिङ, टोनिङ र मोस्चराइजिङ नियमित गर्छिन्। शरीर सुख्खा बन्न नदिन उनी दिनमा प्रशस्त मात्रामा पानी पिउछिन्। जसले शरीरको विषाक्त पदार्थ बाहिर फ्याँक्न मद्धत पुग्छ र शरीरलाई ताजा र सक्रिय बनाउन सहयोग पु¥याउँछ।
आँखाः रेखाको आँखा बोल्ड, प्राकृतिक र अभिव्यक्त गर्ने खालको छ। उनी आँखालाई आकर्षक बनाउन चाहिँदो मात्रामा लाइनर र आइ स्याडो लगाउँछिन्। आँखीभौंलाई हल्का मस्कारा लगाउँछिन् ।
गएरातिदेखि नारायणगढ–मुग्लिन सडक अवरुद्ध
काठमाडाैं । नारायणगढ–मुग्लिन सडक अवरुद्ध भएको छ । मंगलबार साँझदेखि परेको झरीका कारण नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डअन्तर्गत चितवनको इच्छाकामना– ६ स्थित चार…
नागढुंगा-नाैबिसे सुरुङमार्गकाे ठेक्का सम्झौता आज गर्दै
काठमाडाैँ । बहुप्रतीक्षित नागढुंगा-नौबिसे सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सरकारले आज (सोमबार) जापानी निर्माण कम्पनीसँ सम्झौता गर्दै छ ।
जापानकाे निर्माण कम्पनी…
सानी छँदाकी ऐश्‍वर्या (फोटो फिचर)
काठमाडौं । बलिउडकी सुन्दर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चनले केही दिन अघि इन्स्टाग्राममा आफ्नो डेब्यु गरेकी थिईन । डेब्यु गरेको…
वाम एकता साच्चै सकस हो त ? जनमतलाई आधार बनाएर एकता प्रक्रियाबाट बिमुख हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेका दुई दल !
काठमाडौं । सरकार गठनअघि नै एकता प्रक्रियामा जानुपर्ने भन्दै तीन दिन यता…
काठमाडौं । सांगीतिक प्रस्तुतिका लागि नेपथ्य ब्यान्ड कतारको राजधानी दोहा जाने भएको छ । इस्लाम धर्मावलम्बीको चाड ‘इद अल…
अज्ञात समूह द्धारा वडाध्यक्षको मोटरसाइकलमा आगजनी
डडेल्धुरा । डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिका ४ का अध्यक्ष पदम बिष्टको मोटरसाइकलमा गएराति आगजनी भएको छ। अज्ञात समूहले गएराति करिब…
मृत्‍युको सपना, मलामी, शँख र आर्यघाट ! 32 views